musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Air Astana inogamuchira yayo yechitanhatu nyowani Airbus A321LR jeti
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kazakhstan Breaking News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo Airbus A321LR ngarava inoshanda mhiri kwenhandare yendege yenyika dzese, ine nzvimbo dzinosanganisira Dubai, Frankfurt, London (kubva munaGunyana 2021), Istanbul, Sharm el-Sheikh (Egypt) nePodgorica (Montenegro).
Air Astana yakazara yeAirbus A321LR ngarava inobhadharwa kubva kuAir Lease Corporation.
Iyo Airbus A321LR yakagadzirirwa enjini dzichangoburwa Pratt & Whitney injini.
Iyo yeAirbus A321LR ngarava inoshanda mhiri kweAir Astana yepasi rese network.
Airbus A321LR itsva yeAir Astana yasvika kuNur- Sultan International Airport yakananga kubva kumunda weAirbus muHamburg, Germany nhasi. Iyo yose Airbus A321LR ngarava yakabhadharwa kubva kuAir Lease Corporation, nendege yekutanga kusvika munaGunyana 2019 uye imwe yerudzi irworwo inofanirwa kuendeswa pamberi pekupera kwa2021.
The Airbus A321LR yakagadzirirwa enjini dzichangoburwa dzePratt & Whitney injini, idzo dzinodzikisa kushandiswa kwemafuta ne20%, mari yekugadzirisa ne5%, kabhoni inoburitswa ne20% uye ruzha mazinga ne50% zvichienzaniswa neyekare ndege. Iyo kabhini yakagadziridzwa ine gumi nematanhatu-akanyarara-zvigaro muBusiness kirasi uye zvigaro zana nemakumi mashanu muEconomy kirasi, nezvigaro zvese zvakagadzirwa neumwe munhu skrini.
Iyo Airbus A321LR ngarava inoshanda mhiri kwenhandare yendege yenyika dzese, nenzvimbo dzinosanganisira Dubai, muFrankfurt, London (kubva munaGunyana 2021), Istanbul, Sharm el-Sheikh (Egypt) nePodgorica (Montenegro).
The Air Astana boka rinoshandisa ndege makumi matatu neshanu dzinosanganisira 35 Airbus A15 / A320neo, 320 Airbus A12 / A321neo / A321LR, matatu Boeing 321 uye mashanu Embraer E767-E190, pamwe chete anosanganisira mapfumbamwe A2 uye imwe A320 neo ine LCC chikamu, FlyArystan. Avhareji zera remafambisi eAir Astana anongova makore matatu chete, zvichiita kuti ive yeadiki pasi rose.